» किरण कुमार भुजेललाई सर्वाधिक भोट
किरण कुमार भुजेललाई सर्वाधिक भोट
३१ श्रावण २०७७, शनिबार २०:३६
मकवानपुर, ३१ साउन । नेपाल आईडल सिजन ३ का चर्चित प्रतियोगी किरण कुमार भुजेलले यो साता सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका छन् । वाईल्ड कार्ड राउण्ड जितेर उत्कृष्ट ५ मा पुगेका किरणले बिहीबार शोमा सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका हुन् । यसअघि वाईल्ड कार्ड राउण्डमा पनि सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका किरणले दोस्रो पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका हुन् । किरणले बिहीबार मिङ्मा शेर्पाको आँशु झार्दिन म बोलको गीत गाएका थिए । प्रस्तुतिबाट प्रशंसा बटुलेका किरणले लगातार तहल्का मच्चाईरहेका छन् । हेर्नुहोस् यो भिडियो रिपोर्ट–
किरणले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म ५ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले ४ वटा अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड र एउटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका छन् । अडिसन राउण्डदेखि नै चर्चामा रहेका किरणले स्कुले जिवनदेखि नै गाउन सुरु गरेका हुन् । कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दाको समयमा नै गीत गाउन सुरु गरेका किरणले दाईले गाएको देखेर दाईकै नक्कल गर्दै गीत गाउन थालेका हुन् । किरण एसएलसी सकाएपछि वि.सं. २०६५ सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए । काठमाडौँमा आएर सँगीत विषय अध्ययन गरेका किरणले ललितकला क्याम्पसबाट संगितको औपचारिक शिक्षा लिएका छन् । संगितमा नै स्नातक गरेका किरणले वि.सं. २०६५ सालतिर पहिलो पटक आफ्नै गीत निकालेका थिए । जे ब्याण्डमा आवद्ध किरणले चर्चित गीतहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।